Tababare Pep Guardiola oo 7 xiddig ee ay ku jiraan Jesus, Sane & Mendy u tilmaamaya albaabka looga baxo Etihad – Gool FM
(Manchester) 03 Feb 2020. Pep Guardiola ayaa lagu soo waramayaa inuu qorsheynayo inuu kooxdiisa Manchester City ka hor xilli ciyaareedka soo aaddan uu ka fasaxo todobo ciyaaryahan oo kooxda koowaad ah.
Kooxda labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay hanatay horyaalka Premier League ee Man City ayaa 22 dhibcood ka dambeysa hoggaamiyaasha horyaalka ee Liverpool, waxaana hadda ay sheekadda tahay in Man City ay ka fikirayso inay sii xajisato booskeeda loogu soo baxayo tartanka Uefa Champions League.
Kooxda Muwaadiniinta ayaa suuqa xagaaga kooxdooda ka diray Angelino kaasi oo aaday Waddanka Jarmalka kuna biiray RB Leipzig bishii Janaayo, sida laga soo xigtay Jariiradda The Mirror, mustaqbalka xiddigo kale oo kooxda ah ayaa shaki weyn uu ku jiraa ka hor bilaabashada xagaaga dambe.
Pep Guardiola ayaa lagu soo waramayaa inuu qorshaynayo inuu kooxdiisa Manchester City ka hor xilli ciyaareedka soo socda uu ka fasaxo xiddigaha John Stones, Benjamin Mendy, Leroy Sane, Gabriel Jesus, Joao Cancelo iyo Nicolas Otamendi kuwaas oo wax qabad liita soo bandhigay fasal ciyaareedkan.
Kabtanka iyo halyeyga kooxda ee David Silva iyo goolhaye Claudio Bravo ayaa sidoo kale la rajaynayaa inay kooxda ka tagaan, maadaama uu qandaraaskoodu dhacayo.
Warbixinta ayaa sheegaysa in shan ciyaartoy oo cusub uu isha ku hayo Guardiola xilli ciyaareedka 2020-21 si ay kooxdiisa markale ugu soo laabato u tartamidda horyaalka Premier League oo ay xili ciyaareedkan si awood leh ugu guuleysan karayso kooxda Liverpool.
Sidee ayey u muuqan kartaa Shaxda Kooxda Liverpool kulanka ay wajahayso Shrewsbury Town?